WARBIXIN: Emre Can v Kevin de Bruyne & 3 Meelood Oo Ay Ku Kala Badin Karaan Kooxaha Liverpool Iyo Man City – Kooxda.com
Home 2018 January Ingiriiska, Wararka Maanta, Warbixinada Ugu Xiisaha Badan, Warbixino WARBIXIN: Emre Can v Kevin de Bruyne & 3 Meelood Oo Ay Ku Kala Badin Karaan Kooxaha Liverpool Iyo Man City
WARBIXIN: Emre Can v Kevin de Bruyne & 3 Meelood Oo Ay Ku Kala Badin Karaan Kooxaha Liverpool Iyo Man City
January 14, 2018 · by	Abdi Weli Aadan · 0
Manchester City ayaa u safraysa Liverpool maanta oo Axad ah iyaga oo isha ku haya in ay sii dheeraystaan hogaanka horyaalka sidoo kalena isku dayaan in ay sii wataan rikoorkooda guuldaro la,aanta.
Labada kooxood ayaa kulmay bishii September markaas oo ay kooxda Pep Guardiola Liverpool uga badisay 5/0 kulan ka dhacay garoonka Etihad Stadium.
Liverpool ayaa dhankeeda u soo galaysa in ay ka aar gudato kooxda Man city sidoo kale sii wado qaab ciyaareedkeeda ay ku jirtay kulamadii ugu dambeeyay.
Inaga oo taas maskaxda ku hayna waxa aanu halkan ku soo gudbin doonaa 3 meelood oo ay ku kala badin karaan labada kooxood.
EMRE CAN VS KEVIN DE BRUYNE:
Kevin de Bruyne ayaa ahaa ciyaaryahanka ugu fiican ee sannadkaan England isagoo soo bandhigay qaab ciyaareed qurxoon.
Ciyaaryahanka reer Belgium ayaa ku jira qaab ciyaareedkiisii ​​ugu sarreeyay – isagoo dhaliyay lix gool iyo sagaal kale caawiye ka noqday 22 kulan oo uu saftay Premier League xilli ciyaareedkan.
Awoodiisa ciyaareed ee orodka ayuu ku daray tayo kale oo leh weerarka isaga oo laf dhabar u ah weerarka kooxda Man City hadii ay Liverpool u ogolaato in uu qaabkaas u ciyaara kulanka waxa ay Liverpool ku adkaan doontaa in ay qabtaan.
Tani waa halka Emre Can uu shaki gelin karo awooda uu ku leeyahay ciyaarta – isaga oo isticmaalaya qaab ciyaareedkiisa awoodeed si uu u joojiyo xiddigii hore ee kooxda chelsea.
Xiddiga reer Germany ayaa ku jira qaab ciyaareed fiican waxana uu inta badan isticmaalaa awoodiisa jir ahaaneed waxana uu khatar galin karaa khadka dhexe ee Sky Blues.
VIRGIL VAN DIJK V SERGIO AGUERO:
Virgil van Dijk ayaa u muuqday mid muujiyay joogitaaankii kulankii ay Liverpool ku guuleestay Everton kulankii Merseyside Derby todobaadkii hore waxana uu doonayaa in uu qaab fiican ku sii wato noloshiisa Anfield marka uu ka hor yimaado Sergio Aguero.
Weeraryahanka reer Argentine ayaa waxa uu ahaa weeraryahanka ugu fiican kooxda Guardiola labadii xilli ciyaareed ee lasoo dhaafay, isagoo dhaliyay 33 gool oo horyaalka ah tan iyo September 2016, waxana uu mar walba halis ku yahay kooxaha ka soo hor jeeda.
Virgil ayaa leh awood fiican oo dhanka madaxa ama hawada ah iyo waliba kubad dilid fiican waxana ay taasi noqon kartaa mid Aguero ka dhigi karta laba heli karo.
Xiddiga reer Holland ayuuna shaki ku jirin in uu diirada saari doono ciyaartiisa iyo waliba in uu hogaamiyo daafaca Liverpool laakiin waxa uu u baahanyahay in uu ku jiro qaabkiisii ugu fiicnaa si uu u qabto weerarka City.
SADIO MANE V KYLE WALKER:
Walker ayaa qaab waali ah ku jira tan iyo markii uu kooxda kaga soo biiray Tottenham xagaagii la soo dhaafay marka loo eego qaab ciyaareedkiisa haatan waxa uu ka mid yahay xiddiga ugu fiican booskiisa ee wakhti xaadirkan.
Xiddiga reer England ayaa ku tiijsan awoodiisa jira ahaaneed iyo waliba mida kubadeed waxana uu ka hor tagi doonaa xiddiga Sadio Mane marka ay labada kooxood iska hor yimaadaan.
Markii ugu dambaysay ee ay labada kooxood kulmeen bishii September Mane ayaa daqiiqadii 37-aad loo taagay kaarka cas kadib markii uu khalad ku galay Goolhayaha city ee Ederson.
Casaanka Xiddiga reer Senegal ayaa sabab u noqday in ay kooxiidu la kulanto guul weyn oo 5/0 ah laakiin waxa uu haatan doonayaa in uu uga aar gudo kooxdiisa.